Ukunyibilikisa iZiko lokuTyibilikisa isinyithi sokunyibilikisa ubhedu, igolide, intsimbi, njl.
Ikhaya / izicelo / Ukuxuba / Ukunyibilikisa iZiko elinyibilikisa uMlilo
iindidi: I-Flamnace ye-Copper Melting, I-Gold Melting Furnace, Igbt tilting induction yokunyibilikisa iziko, Ukuxuba, I-Induction Fusion Furnace, Ukuthungulwa kweTyunte tags: iziko lokungenisa ubhedu, I-Flamnace ye-Copper Melting, isithando somlilo segolide, igbt induction ubushushu, ityhini, umenzi weziko lomlilo, ukuchithwa kwesithando somlilo, induction isinyibiliko sinyithi, ukuchithwa kwesithando somlilo, Ukunyibilikisa isithando somlilo, Ukunyibilikisa isinyithi somlilo, iziko lokunyibilikisa, Ukucoca isithando somlilo, Ukucoca iziko lokunyibilikisa
Ixesha eliphakathi IGBT inyibilikisa iziko lokungenisa isinyithi
Isinyibilikisi esinyibilikisayo sokunyibilikisa isinyithi sisetyenziselwa ukunyibilikisa isinyithi, intsimbi engenasici, ubhedu, ubhedu, isilivere, igolide, kunye nezinto zealuminium, njl., Amandla okunyibilikisa anokuvela kwi-3KG ukuya kwi-2000KG.
Ulwakhiwo lwesinyibilikisi sokunyibilikisa isinyithi:
Iseti yokunyibilikisa isinyibilikisi ebandakanya ukujikeleza okuphakathi, ukuhlawula isilinganisi somlilo kunye nokunyibilikisa iziko, ubushushu be-infrared sensor kunye nomlawuli weqondo lobushushu nazo zinokufakwa ukuba ziyalelwe.
Iindidi ezintathu zomlilo onyibilikayo zinokuhlelwa ngokwendlela yokuphalaza, Ziyanyibilikisa iziko, iziko lokunyusa kunye neziko elimileyo.
Ngokwendlela yokutsala, isithando somlilo esahlulwe sayahlulahlulwa ngokweendidi ezintathu: isithando somlilo esitsala ngesandla, eziko lombane elitsala kunye nesithando somlilo esisebenza ngamanzi.
Ezona mpawu ziphambili zomlilo onyibilikayo we-MF:
1.Ukunyibilika koomatshini be-MF kunokusetyenziselwa ukunyibilika kwesinyithi, intsimbi engenasici, ubhedu, ialuminiyam, igolide, isilivere njalo njalo.Ngenxa yempembelelo evuselelayo ebangelwe ngamandla ombane, inyibilikisi inokunyanzelwa ngexesha lokunyibilika ukwenza lula ukudada kokuhamba kunye neeoksidi ukuvelisa iindawo ezikhupha umgangatho ophezulu.
2. Uluhlu lobubanzi obubanzi ukusuka kwi-1KHZ ukuya kwi-20KHZ, ukusebenza rhoqo kunokuyilwa ngokutshintsha i-coil kunye nokuhlawula i-capacitor ngokwezinto ezinyibilikayo, ubungakanani, ukuvuselela umnqweno, ukusebenza kwengxolo, ukusebenza kakuhle kunye nezinye izinto.
3. Ukusebenza kwamandla kungama-20% ngaphezulu koomatshini be-frequency SCR;
4.Ncinci kwaye ilula, uninzi lweemodeli lunokuhlelwa ukunyibilikisa inani elithile lezinyithi. Ayisiyifanele kuphela umzi-mveliso, kodwa ikwalungele neekholeji kunye neenkampani eziphandayo ukuba zizisebenzise.
Iimpawu ze-MF Induction Flaming Furnace
1. Kungcono ukufudumeza ukungena kunye nobushushu ngaphakathi kwesinyithi esinyibilikayo.
2. Amandla e-MF endle anganyusa iphuli yokunyibilika ukufezekisa umgangatho onyibilikayo.
3. Ukunyibilika kobungakanani obukhulu ngomatshini ocetyiswayo ngokwetafile engentla ixesha lokunyibilika li-30-50minutes, inyibiliko yokuqala xa isithando somlilo sibanda, kwaye kuya kuthatha malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 ukunyibilika kamva xa iziko sele lishushu.
4. Ukulungele ukunyibilika kwesinyithi, ukubambisana, ubhedu, igolide, isilivere kunye nealuminium, istann, maqnesium, intsimbi engenasici.
Iindawo eziphambili ze-induction melting system:
1. MF Induction Ubushushu Generator.
2. Ukunyibilika komlilo.
3. Imbuyekezo Capacitor
Imodeli yomatshini kunye nobukhulu bokuncibilika kwamanzi:
imodeli I-Steel kunye neNsimbi Engenasici Igolide, iSiliva Aluminium
I-DW-MF-15 15KWMelting Furnace 5KG okanye 10KG 3KG
I-DW-MF-25 25KW I-Furnace Ephungayo 4KG okanye 8KG 10KG okanye 20KG 6KG
I-DW-MF-35 35KW I-Furnace Ephungayo 10KG okanye 14KG 20KG okanye 30KG 12KG
I-DW-MF-45 45KW I-Furnace Ephungayo 18KG okanye 22KG 40KG okanye 50KG 21KG
I-DW-MF-70 70KW I-Furnace Ephungayo 28KG 60KG okanye 80KG 30KG
I-DW-MF-90 90KW I-Furnace Ephungayo 50KG 80KG okanye 100KG 40KG
I-DW-MF-110 110KW I-Furnace Ephungayo 75KG 100KG okanye 150KG 50KG
I-DW-MF-160 160KW I-Furnace Ephungayo 100KG 150KG okanye 250KG 75KG
Thelekisa nezinye izixhobo ukunyibilika
1, VS ukumelana ukufudumeza eziko
a, Ukusebenza kobushushu obuphezulu, ukunyibilika ngokukhawuleza.
b, Ubungakanani obukhulu, gcina amandla kwi-30%.
c, Resistance okanye lesilicon khabhayithi stock kulula ukuba umonakalo.
2, VS Coal, Irhasi, idizili eziko
a, Ukuququzelela ukulungiswa kwesisombululo kunye nobushushu, iqamza lesiseko lingaphantsi kwe-1/3 ukuya kwi-1/4, lilahla ixabiso eliphantsi kwe-1/2 ukuya ku-2/3, ukuze i-cast ibe namandla aphezulu ngomatshini;)
b, Ukunciphisa i-oxidation yokutshisa;
c, Ukunyibilikisa ukunyibilika kunokunyibilikisa izinto ezilahliweyo kunye namaqhekeza amancinci ngenxa yempembelelo yombane .Ukunciphisa iindleko zezinto .Ukunciphisa ungcoliseko lokusingqongileyo; ingxolo iphantsi kakhulu kwezixhobo ezinde .Ukuqina kwabasebenzi kunye neemeko zokusebenza ziphuculwe;
d, Isinyithi esinyibilikayo esisetyenziswe kumalahle nakwiziko legesi kuyingozi kwi-aluminium alloy ngokwanda kokungcola. Isicwecwe esenziwe ngegrafite esetyenziselwa ukunyibilikisa ukunyibilika ngaphandle kokuphazamiseka.)
I-3, VS SCR okanye iTyhefu yoNyibiliko yaRhoqo
b, Ubungakanani obukhulu, gcina amandla ngaphezulu kwe-20%.
c, Isiphumo sokushukuma kombane asiyonto incinci ngoko ke inkonzo yenkonzo ye-crucible iyandiswa.
d, Ngokuhlengahlengisa imeko yokufikelela kummiselo wamandla, isantya esinyibilikayo ngokukhawuleza, izinto ezibonakalayo zokutsha kwelahleko encinci kunye namandla okonga amandla, ngakumbi ukufudumeza intsimbi engenasici, ubhedu, i-silicon, i-aluminium kunye nezinye izinto ezingashukumiyo, oko ke kunciphisa Iindleko zokulahla.